Somaliland oo xukun adag ku riday askarigii dilay Arday dhiganayay Jaamacada Camuudi - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Somaliland oo xukun adag ku riday askarigii dilay Arday dhiganayay Jaamacada Camuudi
Somaliland oo xukun adag ku riday askarigii dilay Arday dhiganayay Jaamacada Camuudi
Maxkamadda Ciidanka Milatariga Somaliland, ayaa xukun dil toogasho ah ku riday Cismaan Diiriye Buraale, oo ah askarigii jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku toogtay Ibraahim Salaad oo ka mid ahaa ardayda jaamacadda Camuud.
Askariga maanta la xukumay, ayaa jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama 5 bishii July ku dilay arday lagu magacaabi jiray Ibraahin Salaad oo kamid ahaa ardayda Kulliyada Ingineerinka ee jaamacadda Camuud.
Xukunsanaha iyo qareenadiisu ayaa waxay haystaan fursad ay rafcaan kaga qaadan karaan xukunka wallow aan si rasmi ah wali loo xaqiijin ay gudbiyaan dalabka rafcaanka oo dhamaanaya 30-casho gudaheeda.
Dilka ayaa yimid kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay asgariga oo kamid ahaa ilaalada jaamacadda iyo Ibraahin salaad, waxayna xukuumadu xiligaas ehelada marxuumka u balan qaaday in askariga dilka gaystay sharciga la marin doono taasi oo maanta maxkamadda millaterigu fulisay.
Marxuumka oo ahaa 23-jir baranayey cilmiga Injineernimada Biyaha ayaa waxaa la sheegay in uu ka qalinjabiyey Iskuulka Najax ee magaalada Boosaso, xarunta ganacsiga dowlada Puntland.
Ibraahim oo qoyskiisa ay dalbadeen cadaalad ayaa ku jiray sanadkii labaad, waxaana uu kamid ahaa ardaydii gashay imtixaankii ugu dambeeyay ee sanad-dugsiyadeedka labaad ee jaamacada.
Toogashadan ayaa waxay kusoo aadey xilli Somaliland ay ciidan dheeraad ah ugu daabushay Boorama markii 26-kii June ay dhalinyaro badan xabsi u dhigtay in ay wateen calanka jamhuuriyada Soomaaliya.
Somaliland ayaa tan iyo 1991-dii waxay sheegataa in ay ka madax-banaan tahay Soomaaliya inteeda kale balse waxay dunida u aqoonsan tahay maamul hoostaga dowlada federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho.